उत्कृष्ठ ब्लगर टेम्प्लेट निशुल्क डाउनलोड गरौ | मेरो कलम
– व्लग बनाईसकेपछि कस्तो टेम्प्लेट राख्ने ? व्लगरले दिएकै टेम्प्लेट निकै साधारण हुन्छन् । राम्रो कन्टेन्ट लेखिसकेपछि डिजाईन पनी राम्रै हुनुपर्छ भन्ने सोचिरहनुभएको छ भने छानी छानी काईदाका टेम्प्लेटहरु सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ । र अर्को फाईदा, निशुल्क नै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ । धेरै मेनुवार एवं फिचर भएका आकर्षण लुक्समा निशुल्क पाईने टेम्प्लेट विश्व चर्चित साईटह जस्तै देखिन्छन् । मन परेका केहि टेम्प्लेटहरु यहाँ संग्रह गरेको छु ।
हफिङगन पोष्ट ।
विश्व चर्चित साईट हफिङगन पोष्टको टेम्प्लेट त कसले पो नहेरेको होला र ? नेपालमा भर्खरै सुरु भएको सेतो पाटी डटकमले समेत हफिङगन पोष्टकै टेम्प्लेट नक्कल गरेर प्रयोग गरेको छ । अझ नेपालकै ज्ञानु वस्नेतले ठ्याक्कै हफिङगन पोष्टकै टेम्प्लेट व्लगरमा कन्र्भट गरेका छन् । यतिका धेरै फिचर भएको टेम्प्लेट निशुल्क पाउन सक्नुहुन्छ । किन डाउनलोड नगर्ने ?
स्पोर्टस् कन्टेन्टमा व्लगिङ गर्न चाहनेहरुको लागी यो टेम्प्लेट उत्कृष्ठ हुन सक्छ ।
फेशन एवं लाईफ स्टाईसगँ सम्वन्धीत व्लगिङ गर्न चाहनेहरुले किन यो टेम्प्लेट प्रयोग नगर्ने ?
आकर्षण लुक्समा यो अर्को टेम्प्लेट ।
मन परेको यो अर्को टेम्प्लेट मिडिया अनलाईन व्लगर थिम हेर्नुस् ।
म्यागेजिन व्लगर थिम हेर्नुस्
म्युजिकसगँ सम्वन्धीत व्लगरहरुको लागी यो सान्दर्भिक हुनसक्छ ।
आकर्षण लुक्समा रहेको यो टेम्प्लेट भने पोखराका विष्णु सुवेदीले वनाएका हुन् ।
Bishnu Subedi May 27, 2013 Log in to Reply
Thank you for featuring my creation here 🙂 But Dude, it's not Welcome Template 🙂 It's 'Porto Responsive' ! Please correct it !
Milan Neupane June 14, 2013 Log in to Reply